Sefafi : “Hisy fanoherana raha tsy fidina izay hiandrakitra ny fokontany” | NewsMada
Sefafi : “Hisy fanoherana raha tsy fidina izay hiandrakitra ny fokontany”
“Mahakasika ny isan’andron’ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny faritra ary ny demokrasia andraisana anjara ny fokontany. Raha tsy izany, hisy fanoherana ny volavolan-dalàna momba izany. Ny tena mety hiseho, tsy hahomby izany fa efa leo ny vahoaka ka hiraviravy tanana. Amin’izay, voa mafy ny firenena sy ny fampandrosoana azy.”
Fanambaran’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi) “Iza no mitetika hamono ny fokontany sy ny kaominina?”, ny 12 marsa, io, nampitaina tamin’ny tranonkalam-pifandraisana, omaly. Tolo-keviny ny hanaovana adihevitra ho an’ny vahoaka momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampiharana azy any amin’ny fokontany.
Manilika vahoaka ny fitondrana ankehitriny
Nivoatra ny lalàna nifehy ny fokontany: fiahian’ny kaominina nandalo tamin’ny distrika, nankany amin’ny fifehezan’ny fanjakana foibe, soloin’ny minisitera misahana ny fitsinjaram-pahefana tena, izay mifamotitra tanteraka satria ny Atitany io.
Hita nihalohalo teo aloha ny fampandraisana anjara ny vahoaka tamin’ny fisafidianana izay hiandraikitra ny fokontany. Tena manilika ny vahoaka amin’izany ilay volavolan-dalàna ankehitriny. Tsy raharahainy fa misy resaka fiarahamonina sy fitiavana ao amin’ny fokonolona, ka nataony vakim-paritra fototra amin’ny fitondrana ny fokontany ary nakambany amin’ny boriborintany ara-pitondrana.
Fototra amin’ny Malagasy ny fokontany
Ho an’ny Malagasy, sehatra tsara indrindra ho an’ny fiaraha-miaina ny fokonolona: ifampikasohan’ny taranaka, ampitana soatoavina, amoahan-kevitra. Rafi-pitantanana ho an’ny vondron’olona fototra izy.
Aleo ihomehezana fotsiny ny kabary momba ny fanapariaham-pehefana hoe antoky ny fampandrosoana. Ny zava-misy: tsy mahazo miteny ny vahoaka, ny mankatoa no anjarany. Ahoana ny hevitry ny mpanao lalàna eo anatrehan’izany, indrindra ireo loholona hoe mpisolo tena ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana? Inona ny hevitry ny tomponandraikitry ny kaominina, ny vahoaka malagasy?
“Tadiavina ny hahafaty tsikelikely ny kaominina sy ny fokonolona ary ny hampikatso tanteraka ny fizotran’ny fitsinjaram-pahefana, matoa atao izao“, hoy ny Sefafi.